यी हुन् कालोबजारीका ठूला माछा जालमा पार्ने प्रहरी कमाण्डर – Koshidaily
access_alarms Koshi daily २८ चैत्र २०७६, शुक्रबार ०८:०२	chat_bubble_outline 0	Comments
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका एक पदाधिकारीले थर्मोगन खोजी गर्दै जाने क्रममा त्रिपुरेश्वका सर्जिकलहरु चाहारे । उनलाई कसैले त्रिपुरेश्वरको कृष्ण इन्टरप्राइजेजमा पाइन्छ भनेपछि उनी त्यस सर्जिकलमा पुगे । उक्त इन्टरप्राइजेजका संचालक सपना अग्रवाल र संजय अग्रवालले २२ हजारमा थर्मोगन उपलब्ध गराउनसक्ने बताए । ३ हजार ५ सयमा पाइने थर्मोगनलाई २२ हजार कसरी तिर्ने ? उनले यसो भन्दा अग्रवालले भनेका थिए रे ‘हामीले जगदम्बाबाट १६ हजारमा ल्याएको, त्यत्रो लगानी गरेपछि ६ हजार त मुनाफा खानुपर्यो नि ? ’ उनी पुनः विशाल सर्जिकलमा गए । बिशाल सर्जिकल कन्सर्नमा पनि पाइन्छ भनेर भनेका त्यहाँ गए । उक्त सर्जिकलका संचालक एबी भण्डारीले पनि २२ हजार तिर्ने भए उपलब्ध गराउन सक्ने बताए । उनी पुनः तिरुपति सर्जिकलमा गए, तिरुपतिले पनि कृष्ण र विशालकै जस्तो २२ हजार पर्ने कुरा सुनाए ।
महामारीमा यस्तो लुट गर्न लागेकाले उनले असह्य भएर कुनै माध्यमबाट अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी थापाकोमा सूचना पुर्याए । त्यसो त अनेरास्ववियुका नेता समिक बडाल पनि आफ्नो जिल्ला काभ्रेका स्वास्थ्य संस्थामा थर्मोगन माग भएपछि खोजीमा निस्किए । उनलाई पनि बिशाल सर्जिकलले २२ हजारमा उपलब्ध गराउने भन्यो । उनले थर्मोगनको कालोबजारीको जरो पत्ता लगाउने क्रममा शंकर ग्रुपका संचालक नै सक्रिय रहेको भनेर आइतबार सामाजिक संजालमा नै लेखे।
अग्रवालसँग थर्मोगनको डिल त गर्यो, तर लकडाउनका कारण महाशाखाले आवश्यक रकम जुटाउन सकेन । अपराध महाशाखाले यस्तै कामका लागि राखिएको सो मनी पनि बैंकखातामा थियो । पैसा जुटाउन नसकेपछि आइतबार सामान लिन जान सकेन । चेकमा कारोबार गर्न अग्रवाल तयार नहुने पैसा कहीँबाट नजुटेपछि सोमबार पनि प्रहरीले एक्सन लिन सकेन । र, मंगलबार जसरी पनि पैसा जुटाएर कालाबजारीयालाई जालमा पार्न एसएसपी थापा लागे ।
मंगलबार १० लाख नगद र ५ लाख रुपैयाँको चेक लिएर प्रहरी अग्रवालले दिएको लोकसनमा गए । पैसा बोकेर सादा पोशाकका प्रहरी सामान रिसिभ गर्न तयार भएर बसेका थिए । अग्रवालले कूटनीतिक नियोगको गाडीमा आएर थर्मोगन लिने ग्राहकको खोजी गर्न थाले । पैसा बोकेका ग्राहकले आफू नै हो भनेपछि अग्रवालले सो गाडीबाट सामान निकाले । तर चेक नलिने बरु १० लाखको मात्र ६६ थान थर्मोगन दिने भनेर निकाल्न थाले । उनले ६६ थान थर्मोगन निकाल्दानिकाल्दै प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लियो र सामान पनि बरामद गर्यो । प्रहरीको फन्दामा परेपछि उनले आफू कूटनीतिक नियोगको मानिस भएकाले पक्राउ गर्न नसक्ने भन्दै ध्वाँस दिए । एकछिन त प्रहरी अधिकारी अलमलमा परे । तर एसएसपी थापाले कूटनीतिक नियोगको गाडीमा कालोबजारीका सामान बोक्न पाइँदैन, त्यस्तालाई त झन् कडा कारबाही गर्नुपर्छ, जो भए पनि नछोड्नू भनेपछि उनलाई भ्यानमा कोचेर लगिएको थियो । नियन्त्रणमा लिइसकेपछि सुलभले बलजफ्ती गरी फुत्किन खोज्दा प्रहरी भ्यानको लुकिङ ग्लास नै फृुटेको थियो।